ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာတို့ရဲ့ အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့ လပြည့်နေ့လေးမှာ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ဆီနြန် – အနုပညာရပ်ဝန်း
ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး Catwalk Model တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Sinon Loresca က မြန်မာနိုင်ငံကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခဏတာ လာရောက်ရာမှ ပြန်မာလူမျိုးတွေအပေါ် သံယောဇဉ်တွယ်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် Sionon က သူ့ရဲ့ အချိန်တော်တော်များများကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလှူအတန်းနဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ရင်း ကုန်ဆုံးနေလျက်ရှိပါတယ်။ အလှူအတန်းတွေကို ရက်ရက်ရောရောပြုလုပ်တဲ့ Sinon ကို အားပေးကြတဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေကလည်း အခုဆိုရင် အများအပြားရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပရိသတ်အခိုင်အမာရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Sinon က ဒီကနေ့မှာလည်း သူ့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူတစ်ခုကြောင့် ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုတိုးစေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Sinon က ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာတို့ရဲ့ အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့ လပြည့်နေ့လေးမှာ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပြီး သံဃာတော်တစ်ပါးကို ဦးချကန်တော့ခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Sinon ကတော့ သူ့ရဲလုပ်ရပ်ဟာ အထူးအဆန်းမဟုတ်ပဲ “ဘာသာတရား ၊ ယဉ်ကျေးမှု ၊ ယုံကြည်မှုတွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ကိုယ် မတူရင်တောင် လေးစားမှုပမာဏနဲ့ ထိုက်တန်ပါတယ် ?? ❣️” လို့ ဆိုထားပါတယ်။ Sinon ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအပေါ် လေးစားမှုရှိတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးက အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းလှပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး Catwalk Model တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Sinon Loresca က မြန်မာနိုင်ငံကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခဏတာ လာရောက်ရာမှ ပြန်မာလူမျိုးတွေအပေါ် သံယောဇဉ်တွယ်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Sionon က သူ့ရဲ့ အချိန်တော်တော်များများကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလှူအတန်းနဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ရင်း ကုန်ဆုံးနေလျက်ရှိပါတယ်။ အလှူအတန်းတွေကို ရက်ရက်ရောရောပြုလုပ်တဲ့ Sinon ကို အားပေးကြတဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေကလည်း အခုဆိုရင် အများအပြားရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Sinon ကတော့ သူ့ရဲလုပ်ရပ်ဟာ အထူးအဆန်းမဟုတ်ပဲ “ဘာသာတရား ၊ ယဉ်ကျေးမှု ၊ ယုံကြည်မှုတွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ကိုယ် မတူရင်တောင် လေးစားမှုပမာဏနဲ့ ထိုက်တန်ပါတယ် ?? ❣️” လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Sinon ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအပေါ် လေးစားမှုရှိတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးက အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းတွေကြောင့် မြန်မာဆန်ဆန် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အထင်းစား ပေါ်လွန် လှပလွန်းသူ “မျက်ဝန်း”